What programming language should be learn first ? - MYSTERY ZILLION
What programming language should be learn first ?
March 2010 edited March 2011 in My Article
အခုမှ programming ကို စသင်မယ်။ ဘာကို စလေ့လာသင့်လဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကတော့ စလုံးရေစဖို့ ပြင်နေတဲ့သူတွေအတွက်က အသိချင်ဆုံးပါပဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ C++ ကနေ စသင်စေချင်တယ်။ Why C++ !!! လို့ ဆိုရင်တော့ ရှင်းပါတယ်။ အခြေခံ အကျဆုံးနဲ့ သက်တမ်း အရှည်ဆုံး ဖြစ်ပြီး ယနေ့တိုင် သုံးနေဆဲ language မို့ပါပဲ။ programming စလေ့လာဖို့ ပြင်တဲ့ သူတွေ မေးတတ်တဲ့ မေးခွန်းရှိတယ်။ ဘယ် language က မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ သင့်တော်မလဲ။ ဘယ် language က အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှိမလဲ။ PHP တို့ ASP.NET တို့ကကော internet မရှိပဲ ရေးလို့ရလား။ web server တွေလိုတယ်လို့ ကြားတယ်။ စသည်… စသည်ဖြင့် မေးခွန်းပေါင်းမြောက်မြားစွာ ရှိတတ်ပါတယ်။ အရင်ဆုံး ဘာမှမစဉ်းစားနဲ့။ စစဉ်းစားရမှာက ငါ တကယ်လုပ်ချင်ရဲ့လားဆိုတာကိုပါ။ programming ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိသေးချိန်မှာ သူများတွေ အလုပ်အကိုင်ကောင်းတယ် နောက်ပြီး Programmer ကြီး ဆိုပြီး အထင်ကြီးစရာထင်တတ်ကြပါတယ်။ Programmer နဲ့ Developer ကွာပါတယ်။ Developing လုပ်တာနဲ့ Progrmming လုပ်တာကလည်း ကွာပါတယ်။ ဒါတွေက နောက်ပိုင်း သိလာမှာပါ။
အရင်ဆုံး Programming စပြီး မလေ့လာခင် အရင်ဆုံး programming ကို ဘယ်နေရာမှာ သုံးလဲ။ programming သုံးပြီး ဘာတွေ လုပ်လို့ရလဲ။ programming ဆိုတာက ဘာလဲ။ website ဆိုတာက ဘာလဲ။ စတာတွေကို ကွဲကွဲပြားပြား သိအောင် သိတဲ့ သူတွေကို အရင်စုံစမ်းမေးမြန်းကြည့်ပါ။ မေးကြည့်လို့မှ ဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်တော့ programming ကို စလေ့လာလို့ရပါပြီ။ သိထားသင့်တာက programming မတတ်ပဲနဲ့လည်း အသက်ရှင်နိုင်တယ်။ လောကမှာ program ရေးနေတာကမှ အလုပ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့ နားလည်ဖို့လိုပါတယ်။ ဘာလို့ ဒီလိုပြောရလဲဆိုတော့ programming စလုပ်တော့မယ်ဆိုကတည်း ကိုယ့်ဘဝရဲ့ အဖိုးတန်ဆုံး အချိန်တွေကို ပေးဆပ်ရတော့မယ်။ ဝါသနာမပါပဲနဲ့ ၁ နှစ် ၂ နှစ်လောက် ပေးဆပ်လိုက်ပြီး programming လောကကနေ ထွက်သွားတဲ့သူတွေ ရှိသလို စိတ်မပါပဲ အတင်းမလုပ်ချင် လုပ်ချင်နဲ့ လုပ်နေတဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ နောက်တချက်က programming စလေ့လာမယ်ဆိုရင် သိထားဖို့က ငွေကုန်မယ်။ အချိန်ကုန်မယ်။ အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ ရလာမှာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့် အိမ်မက်နန်းတော်ကြီး တည်ဆောက်လို့ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ တစ်ချို့ မိသားစုတွေမှာ programming လေ့လာချိန်မှာ အချိန်တွေ ငွေတွေကုန်တယ်လို့ မြင်တဲ့ မိသားစုတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ သူတို့ ထင်တာ မမှားပါဘူး။ သာမာန်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ programming တစ်ခုကို လေ့လာပြီး ၃ လ ၄ လ လောက်နဲ့ မတတ်ကျွမ်းကျင်ပါဘူး။ language တစ်ခုကို ပိုင်နိုင်ဖို့ အမြန်ဆုံး ၁ နှစ်လောက်တော့ ကြာပါတယ်။ ၁နှစ်ဆိုတဲ့ အချိန်တောင် သိရုံလောက်ပဲ သိတဲ့ အချိန်ပါ။ ဒါတွေကို နားလည်ထားဖို့လိုတယ်။ နောက်ပြီး computer တက္ကသိုလ်တက်တဲ့သူတွေကတော့ မဖြစ်မနေ programming ကို လေ့လာရမှာပါ။ programming မသင်ချင်ရင်တော့ computer တက္ကသိုလ်ကို မရွေးချယ်သင့်ဘူး။
C++ ကို ဘာလို့ စသင်သင့်လဲဆိုတာကို မပြောခင် Programming ဆိုတဲ့ သဘောတရား အကြောင်းကို အရင် ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ လောကကြီး တစ်ခုလုုံးရဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို ကြည့်လိုက်ပါ။ တဆင့်ပြီးမှ တဆင့် ဖြစ်ပျက်နေတာပါ။ အကြောင်းကြောင့် အကျိုးတွေ ဖြစ်နေတာကို အရင်ဆုံး ဂရုပြုသင့်ပါတယ်။ ဥပမာ။။ ကျောက်ခဲ တစ်တုံးကို ကောက်ကိုင်ပြီး ပစ်ပေါက်လိုက်တဲ့ အဆင့်လေးကို အရင်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ကျောက်ခဲတုံးက အလိုအလျောက် ရွေ့သွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ အရင်ဆုံး ကောက်ကိုင်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အားထည့်လိုက်ပြီး ပစ်လိုက်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျောက်ခံတုံး ရွှေ့သွားတယ်။
ဒါကို နားလည်ရင် နောက်တဆင့်အနေနဲ့ ထပ်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ လောကကြီးမှာ အဆင့် ၃ ဆင့်ပုံမှန်လုပ်တယ်။ Input > Process > Output ဆိုပြီး ရှိနေပါတယ်။ သင် အစာစားလိုက်တယ်။ စားလိုက်တဲ့ အစာကို အစာအိမ်က ခြေဖျက်ပြီး မလိုအပ်တာတွေကို ပြန်စွန့်ထုတ်တယ်။ ခုနက ကျောက်ခဲ ဥပမာ မှာလည်း Input အနေနဲ့ ကျောက်ခဲကို ကောက်ကိုင်လိုက်တယ်။ Process အနေနဲ့ အားထည့်ပစ်လိုက်တယ်။ Output အနေနဲ့ကျောက်ခဲ လွှင့်သွားတယ်။ ဒါဟာ အရိုးရှင်းဆုံး အပိုင်းလေးတွေပါ။
Programming ဆိုတာကလည်း အဲဒီ သဘောတရားပါပဲ။ သူကတော့ Computer ခိုင်းစေဖို့အတွက်ပါ။ Computer ကလည်း Input, Process,Output နဲ့ အလုပ်လုပ်ပေးပါတယ်။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ output ရဖို့အတွက် input ထည့်ပေးရပါတယ်။ အဲဒါကို processing လုပ်ပြီး output ထွက်လာတာပါ။ Computer ခိုင်းဖို့အတွက်လည်း တဆင့်ပြီး တဆင့်ခိုင်းရတာပါ။
ဥပမာ။။ user ဆီကနေ ဂဏန်း တစ်လုံးတောင်းတယ်။ ပြီးရင် ၂ နဲ့ မြှောက်ပြီး user ကို ပြန်ပြမယ်။ အဲဒီ အဆင့်ကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။ အရင်ဆုံး user ကို input ထည့်ခိုင်းမယ်။ ပြီး process အနေနဲ့ ၂ နဲ့မြှောက်လိုက်တယ်။ output အနေနဲ့ မြှောက်ထားတဲ့ result ကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်။
user အနေနဲ့ကတော့ ဂဏန်းတစ်လုံးထည့်လိုက်တယ်။ ၂ ဆ ဖြစ်တဲ့ result ထွက်လာတယ်။ ဒါပဲသိပါတယ်။ Programmer က process တွေကို sequence အလိုက်ရေးပေးထားပါတယ်။ ဒါဆိုရင် Computer ကို ဘယ်လိုခိုင်းမလဲ ဆိုတာ မေးစရာဖြစ်လာပါတယ်။
Computer ကို ခိုင်းစေဖို့ computer နားလည်တဲ့ ဘာသာစကားကို ကိုယ်က သိထားဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘာသာစကား တစ်ခုကို လေ့လာဖို့ လိုပါတယ်။ ဘာသာစကားတွေက အများကြီးရှိပါတယ်။ အခြေခံအနေနဲ့ ပထမဆုံး စလေ့လာသင့်တာကတော့ C++ ပါ။ သူများတွေ အော်အော်နေတဲ့ .NET ဆိုတာကြီးက စလေ့လာရင်ကော မရဘူးလား။ မရဘူး မဟုတ်ပါဘူး။ ရပါတယ်။ သို့သော် .NET ကနေ စလေ့လာလိုက်တဲ့အခါ အခြား ဘာသာစကား ကူးဖို့ ခက်သွားပါလိမ့်မယ်။ .NET ဟာ IDE base လို့ ဆိုလို့ရပါတယ်။ IDE မရှိရင် ရေးတတ်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဘာလို့C++ ကို စလေ့လာဖို့ လိုလဲဆိုရင် အားလုံးရဲ့ အစ … အားလုံးရဲ့ အနှစ်ချုပ်က C++ လို့ဆိုလို့ရပါတယ်။ ယခုတိုင် သုံးစွဲနေဆဲပါ။ တခြားမကြည့်ပါနဲ့။ waitzar လည်း C++ ကို အသုံးပြုထားသလို keymagic ကလည်း C++ ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ နောက်ပြီး Game တွေရေးတဲ့အပိုင်းမှာလည်း C++ ကို လက်ရှိ အခုတိုင် သုံးစွဲနေဆဲပါ။ နောက်ပြီး Linux kernel ကလည်း C နဲ့ပဲရေးထားတာပါ။ C++ ဆိုကတော့ C programming lanuage ရဲ့နောက်ထပ် version ပေါ့။
C++ ကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့် Object Orient Programming ကိုနားလည်သဘောပေါက်စေပါတယ်။ Object Orient ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတော့ object တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းပြီး program code တွေကို အလုပ်လုပ်စေခြင်းပါပဲ။ တကယ်လို့ vb6 ကိုသာ စသင်လေ့လာခဲ့မယ်ဆိုရင် OO ကို ကြောက်လှန့်နေရပါလိမ့်မယ်။ vb6 က ရေးရတာ အရမ်းကိုလွယ်ကူပြီးတော့ OO လုံးဝပါဝင်မှုမရှိပါဘူး။ .NET က စလေ့လာမယ်ဆိုပြန်တော့လည်း IDE base ဖြစ်တာရယ် OO တွေက ချက်ခြင်း ထိတွေ့ရမှာ ကြောင့်ရယ်ကြောင့် စပြီး လေ့လာသင့်တဲ့ language မဟုတ်ပါဘူး။ Ruby ကို စလို့ မရဘူးလာဆိုရင်တော့ ruby က အရာအားလုံးဟာ object ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အယူအစကို ချက်ခြင်း လက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ java လည်း ထိုနည်းအတိုင်းပါပဲ။ java ကို စပြီဆိုတာနဲ့ OO ကို အမြန်ဆုံး ထိတွေ့ရပါတော့မယ်။ PHP , ASP.NET တွေကကော ဆိုရင်တော့ ခဏလောက်စောင့်ပါ။ သိပ်မလောပါနဲ့။ PHP , ASP.NET စတာတွေက web development ပိုင်းရောက်သွားပါပြီ။ အဲဒါတွေကို လုပ်ချင်ရင် အရင်ဆုံး programming ကို စလေ့လာဖို့ လိုပါတယ်။ C++ ကို လေ့လာပြီးမှ စိတ်ကြိုက် language ကို ကူးပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ ကူးပြောင်းရာမှာလည်း လွယ်ကူပါတယ်။ C++ အခြေခံပိုင်ခဲ့ရင် အခြား proramming language တွေမှာ အခက်အခဲမရှိ မြန်မြန်ဆန်ဆန် လွယ်လွယ်ကူကူ သင်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး C++ က windows,linux,mac မရွေးပဲ ရေးနိုင်ပါတယ်။ C++ သဘောတရား အနည်းငယ်ကို မြန်မာလို ဒီမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
C++ ကိုလေ့လာဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးက သင်တန်းတက်လိုက်ပါ။ အခြေခံအဆင့်မှာတော့ ဆရာနဲ့ စနစ်တကျ သင်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဒါမှမဟုတ် ဟိုးအရင်တုန်းက ဦးအောင်မြင့် C++ စာအုပ်ရေးဖူးတယ်နဲ့တူပါတယ်။ ရှာဖို့တော့ ခက်လိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် 4shared.com ကနေ ဖြစ်ဖြစ် ebook ရှာပြီး ဖတ်ပြီး လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ထောက်ခံပါတယ် ဆီသမားဆိုတော့ ဆီဘဲညွန်ရမှာဘဲ :P စလေ့လာခါစက language၊ library နဲ့ IDE ဆိုပြီး မကွဲတတ်သေးဘူး။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် C ကိုစကိုင်လိုက်မှဘဲ အော်ဒါက language features၊ ဒါက library၊ ဒါကဖြင့် IDE feature လို့ကွဲသွားတယ်။ VB နဲ့ရေးတုန်းက အဲဒါတွေက ရောနေတာ။
ကျွန်တော်က vb6 ကနေ စခဲ့တော့ C++ နဲ့တွေ့မှပဲ OO ဆိုတာ သိတော့တယ်။ OO ကို မနည်း နားလည်အောင် ကြိုးစားလိုက်ရတယ်ဗျာ။ အစက OO မရှိပဲနဲ့ အကုန် ရေးလို့ရတယ်ထင်နေတာ :P ကျောင်းမှာ C++ စသင်တော့ OO ကို မလိုအပ်ဘူးလို့တောင် ထင်ခဲ့တာဗျ။
နောက်ပြီး computer တက္ကသိုလ်တက်တဲ့သူတွေကတော့ မဖြစ်မနေ programming ကို လေ့လာရမှာပါ။ programming မသင်ချင်ရင်တော့ computer တက္ကသိုလ်ကို မရွေးချယ်သင့်ဘူး။
ဒီစကားကိုတော့ တော်တော်လေးကြိုက်သွားပြီ မှန်လည်းမှန်ပါတယ်ဗျာ ဒါပေမယ့် ဒါကိုအခုထိလက်မခံသေးတဲ့သူတွေအတော်များတယ်
ဒါနဲ ့ကျွန်တော်သိချင်တာက C++ ဆိုရင် ပေါ့ဗျာ အကုန်နားလည်ဖို ့လိုလား ( ကျွန်တော်တို ့ကျောင်းမှာသိတဲ့အတိုင်းပဲ စာအုပ်အထူကြီးကို အကုန်မှမသင်သွားတာ :P) ဆက်သင်ရဦးမှာလား အပြင်မှာ C++ ကိုသင်တန်းတွေဘာတွေတက်သင့်သလား
C++ နဲ ့တော့ အသက်မွေးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ တခြား language တစ်ခုခုနဲ ့ပေါ့ အဲဒီအခြေအနေမှာဆိုရင် ကွန်ပျုတာတက္ကသိုလ် ပထမနှစ်မှာသင်ခဲ့သလောက်နဲ ့လုံလောက်ပါသလား ဖြေပေးကြပါခင်ဗျာ
သင်ပေးလိုက်တဲ့ ပမာဏထက် ကိုယ်သင်ယူခဲ့တဲ့ ပမာဏကိုပဲ စဉ်းစားပေါ့ဗျာ။ စာအုပ်အထူကို ကုန်အောင်မသင်ရင် ကိုယ်တိုင်ဖတ်ပေါ့ဗျ စာအုပ်ကအဓိကမကျပါဘူး ခင်ဗျားတို့ကမှ စာအုပ်အထူမြင်ဖူးသေးတယ် ကျွန်တော်တို့တုံးက လက်တစ်ဝါးလောက် စာအုပ်လေး စာမျက်နှာ ၃၀ လောက်ရှိတာပါ ဖတ်စရာစာအုပ်အထူကို ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရှာရတာ ရှာစရာမလိုပဲ ဖတ်စရာစာအုပ်ရှိတာ ခင်ဗျားတို့ကံကောင်းတာပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့တုန်းက စာအုပ်က ပါးပါးလေး။ အခုမှသာ စာအုပ်က ထူသွားတာ။ အဓိက concept ပါပဲ။ OO conecnpt နဲ့ programming concept ကို C++ မှာ သေချာလေ့လာလို့ရပါတယ်။ စာအုပ်ထူတော့လည်း ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဖတ်လို့ရတာပေါ့။ ကျွန်တော် အလှည့်တုန်းက စာအုပ်လေးက ၇ ရက်လောက်ဆို ကုန်သွားပြီ။ Second Year မှ စာအုပ်ပြောင်းသွားတာထင်တယ်။ First Year တုန်းက သင်ခဲ့ရတုန်းက OO လည်း ပါဘူး။ အဲတုန်းက Flow chart ကော pseudo code ကော သင်တယ်။ အခုကျောင်းမှာ အဲဒီ ၂ ခု မသင်တော့ဘူးထင်တယ်။
ကျွန်တော်တုန်းကတော့ BASIC စလေ့လာခဲ့တယ်။ အဲတုန်းကတော့ graphic ပိုင်းရောက်တော့ ခေါင်းတော်တော်မူးသွားတယ်။ ကျွန်တော်အထင် လုံး၀အစမ်းသက်သက်လေ့လာမယ်ဆို BASIC လဲမဆိုးဘူး။ Syntax ကသိပ်ပြီး strict မဖြစ်တော့လေ။ ပြီးရင်တော့ တဆင့်ခံ C/C++ ကိုသွားသင့်တယ် ထင်တယ်။ OOP လောက်နားလည်လာရင်တော့ ကြိုက်တဲ့ language/platform/field ကူးလို့ရပြီ။
တချို့လူတွေ programming ကိုသေအောင်ကြောက်ကြတာ သိပ်နားမလယ်ဘူး။ Programming ကအဲလောက်လဲ မခက်ပါဘူး။ ခေါင်းဖြူအောင် စဉ်းစားရတာလဲ မဟုတ်ဘူး။
ကျွန်တော်လဲ programming ကို စတင်လေ့လာ မလို့ ပဲ။ အစ်ကို ပြောသလို ဆို C++ ကို စတင်လေ့လာ ရမှာပေ့ါ။ အဲဒီ C++ ကို လေ့လာပြီးရင် နောက်ထပ် လေ့လာဖို့အတွက် PHP, ASP.Net တို့ က ဘာတွေအတွက် အသုံ၀င်ပါသလဲ။ နောက်ပြီး J2EE တို့ဘာတို့ ပေါ့နော်။ အဲဒီ ဘာသာတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တော့ ရှင်းပြပေးပါဦးလား။ ဒီဘက်ပိုင်းမှာ programming ကို မြန်မာလို ရေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေ မတွေ့မိဘူး (ဇော်လင်း(YOUTH) က ရေးတဲ့ စာအုပ်ပဲကျွန်တော်တွေ့ဖူးသေးတယ်) ရှိရင် လဲ လမ်းညွန်ပေးပါဦး။
Opportunity knocks the door!
စာကလေး wrote: »
PHP , ASP.NET စတာတွေက web development ပိုင်းရောက်သွားပါပြီ။
Web Development ပိုင်းသွားချင်ရင် programming တတ်တိုင်းမရပါဘူး။ အခြေခံအဆင့် web essential ကိုထပ်လေ့လာရပါတယ်။
ရှိပါတယ် ဦးအောင်မြင့်ရေးတာလေးတွေရှိပါတယ် ကောင်းလည်းကောင်းပါတယ် ကျွန်တော် စာမေးပွဲရှိလို ့လောလောဆယ်တင်မပေးနိုင်တာခွင့်လွတ်ပါဗျာ
ဦးအောင်မြင့်ရဲ့စာအုပ်ပါ။ volumn 1,2,3 သုံးခုလုံးပါပါတယ်။ scan ဆွဲထားတာဆိုတော့ ဖတ်ရတာ သိပ်အဆင်တော့မပြေလှဘူး။ အဆင်ပြေရင် c++ for dummies လိုမျိုး စာအုပ်လေးတွေ ဖတ်ကြည့်ပေါ့။
ဦးအောင်မြင်လား အဲဒီ့စာအုပ်က အားမနာတမ်းပြောရရင် သုံးစားလို့သိပ် အဆင်မပြေဘူး :P ရေးထားတဲ့ Chapter တွေက အစီအစဉ်က ကလောက်ကမနဲ့ ပါလာတဲ့ ဥပမာတွေက Logic Building ကိုအထောက်အကူမပြုဘူး Engineering Equation တွေကို Program အဖြစ် ဘာသာပြန်ထားတယ်လို့ ပြောရမလိုဖြစ်နေတဲ့ ဥပမာတွေနဲ့ သိပ်ပြီးအဆီအငေါ်မတည့်ဘူး။
ဒီအောက်ကဆိုက်လို ဟာလေးတွေဖတ်ပေါ့ ကောင်းတယ်တော့မဟုတ်ဘူး လွယ်ပါတယ် ဘာမှကို သိပ်ခက်ခက်ခဲခဲမပါဘူး။
web essential ကိုထပ်လေ့လာရပါတယ်။
What are those? (hehe Brother I wanna know answer naw):rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
သံယောဇဉ်မင်း wrote: »
I think you do not check his tree diagram.. I like you to check it again.
အခုလိုရှင်းပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် တက်မှ programming language နဲ့ စထိတွေ့တာပါ ပထမနှစ်မှာ စသင်ရတာကတော့ c++ ဆိုတော့ အဆင်ပြေပါတယ် အကိုပြောတာကိုလုံး၀ထောက်ခံပါတယ် စလေ့လာဖို့ အသင့်လျော်ဆုံးက c++ ပါ ပြီးတော့ programming ကိုစိတ်မ၀င်စားရင် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မရွေးနဲ့ဆိုတာလည်းမှန်ပါတယ် ဒီမှာ အမှတ်မှီလို့ ဘာမှန်းမသိ ညာမှန်းမသိ လာတက်ပြီး programming လည်းစသင်ရော စိတ်အပျက်ဆုံးဘာသာက programming ဆိုပြီးဖြစ်သွားတဲ့လူတွေ အများကြီးပါ နောက်ပြီး အသေချာဆုံးတခုကတော့ computer တက္ကသိုလ်ပြီးရုံလောက်နဲ့ programming လုံး၀လုံး၀ ပိုင်ပြီလို့ ပြောလို့မရပါဘူး အခြေခံလောက်ပဲ ပါသွားမှာပါ ဒါကြောင့် ကျောင်းပြီးရင် သင်တန်းတွေတက်ရမယ်ဆိုတာတော့ မလွဲမသေပါပဲ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ခေါင်းထဲမှာ concept ရှိတာပဲ စာအုပ်တွေ ဖတ်မယ် Internet ကလေ့လာမယ် ဆိုပြီးလေ့လာမယ်ဆိုလည်းရမယ်ထင်ပါတယ် ကိုယ့်ရှေ့မှာ programming သင်တန်းမတက်ဘဲ programmer ဖြစ်သွားတဲ့လူ မြင်ဘူးလို့ပါ
Eaindra wrote: »
ကွန်ပြူတာ တက္ကသိုလ်တက်တဲ့ သူတွေကို မြင်ရင် ကျွန်တော် အရမး်အားကျပါတယ် . အော် ငါမတက်လိုက်ရတဲ့ ကျောင်းကြီးက သူတွေ ပေါ့လေ .
( ကျွန်တော် တို့ တုန်းက စဖွင့်ကာစ . တက်ချင်လိုက်တာမှ ဖင်တ၇ွရွနဲ့ )
ဒါပေမယ့် ကွန်ပြူတာ တက္ကသိုလ် တက်ပြီး programming မတတ်တဲ့ သူတွေကို မြင်ရင် ပိတ်ကန်ချင်ပါတယ် .
အော် ငါ လို ငပိန်းတောင် အဲဒါလေး အခြေခံ တတ်လို့ အခု လို လုပ်စားလို့ ရနေချိန်မှာ . သူတို့ တွေ ဘာလို့ မတတ်တာလဲ ပေါ့လေ .
နောက်မှ သိီးသန့် ထပ်ေ၇းမယ် အသေးစိတ်ေ၀ဖန်လေကန်ထားတာကို .
ကျနော် C++ သင်ခါစလောက်ကတော်တော်ရွာလည်တယ်ဗျ
၃ လသင်တန်းကို ၅လလောက်တက်လိုက်ရတယ်
အဲဒိပီးတော့ မြောက်ကြွမြောက်ကြွနဲ့ C++ နည်းနည်းကျွမ်းသွားတယ်ထားပါတော့
အဲဒါနဲ့ သင်တဲ့ဆရာက Advance C++ တက်မလားလို့မေးတယ်
ဒါနဲ့ တက်မယ်ပေါ့ စပီးသင်လိုက်တယ် နောက် ၅လလောက်ကြာတော့ ကျနော် ရူးချင်စိတ်ပေါက်လာတယ်
တော်တော်လေး စဉ်းစားရတာ ဘာတွေမှန်းကိုမသိဝူး loop တွေလဲမပါတ်တတ်တော့ဘူး အကုန်မေ့ပီးအကုန်ရောကုန်တာ
စိတ်လေတယ် သင်တန်းသာပီးလို့ လက်မှတ်သာရလိုက်တယ် သိလားဆိုတော့ ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုဖြစ်နေတယ်
အဲဒါနဲ့ မဖြစ်ဘူးပေါ့ အင်းဝကနေ စာအုပ်တွေမှာဖတ်ရတယ်
အင်္ဂလိပ်စာအုပ်ဆိုတော့ အဓိပ္ပါယ်နားမလည်တာလဲပါတယ် တစ်ချိူ့ဘာသာမပြန်တတ်တာလဲပါတယ် ဆက်မလေ့လာဖြစ်တော့ဘူး
မန္တလေးမှာ Gusto သင်တန်းလာဖွင့်ပီတဲ့ Java သွားတတ်ရအောင်ဆိုတော့
အဖော်လဲရှိနေတာပဲဆိုပီးသွားတတ်လိုက်တယ် စသင်ခါစကတော့ သဘောကျတာပေါ့ C++ နဲ့ဆင်တယ်ဆင်တယ်ဆိုပီး
ခု ကျနော် Java လဲပီးသွားပီ ခုထိလိုင်းကြောင်နေတုန်းပဲ
ကိုယ်ဝါသနာပါတာ စစ်ကြည့်တော့ Web ပိုင်းလဲဝါသနာပါတယ် Mobile လဲဝါသနာပါတယ်
ဘယ်လိုက်လို့လိုက်ရမှန်းကိုမသိတော့ဘူး ခုထိပါပဲ လိုင်းကြောင်တုန်း....
တကယ်မသိလို့ တခုလောက်မေးချင်လို့ပါဗျာ။ ကျွန်တော် C++ မတက်ဖူးပဲနဲ့ အခု C#.NET ကိုတက်နေတာ သင်ခန်းစာပိုင်းအနေနဲ့ နည်းနည်းလက်တစ်ဆစ်စာမျှ ခရီးရောက်သလောက် ရှိသွားပါပြီ။ ပရိုဂရမ်အသေး လေ့ကျင့်ခန်းများကိုတော့ Visual Studio သုံးပြီး ရေးရတာ နားလည်ပါသည်။ မရှက်တမ်း၀န်ခံရရင် နားလည်သလောက် အရတော့ ဘာမှမတတ်မြောက်သေးပါခင်ဗျာ။ C++ ကို ပြောင်းတက်ရင်ကောင်းမလား.. ဒါမှမဟုတ် C#.NET ကိုပဲ ပြီးဆုံးအောင်တက်ရင်ကောင်းမလား.. အကြံဉာဏ်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။
အဆင့်ကျော်တယ်ပဲပြောရမလား ... ဘယ်လိုပြောရမလဲတော့မသိဘူး ..
နောက်ပိုင်းတော့ web နဲ ့ပတ်သက်တာပဲဆက်လုပ်ဖြစ်ဖို ့များတယ် .. အဲလိုဆိုရင်ကော C ++ ကိုပြန်လုပ်ဖို ့လိုလားသိချင်ပါတယ် ..
Start with C++ , Now on PHP
Ya' Start with C++ , Java , VB and Assembly .
But I can just doaHello World :P
This is the flow of UCSY.... :P
DragonVirus wrote: »
I'm start with Pseudo over 1 month ...
and then learn VB6... After that VB.NET > C++ and Java (Basic) > C# > ASP.NET > PHP and now Objective C
When I learn Objective C , I need to recall memory of C++
Ya' My First Love is C++ . But I havealittle bit complicated relationship with VB6 . I loved her (VB6) coz of very easy for n00b at that time . I thought it reli work and evenan00b can do binary .exe program. But Our Sku learned C++ and it very confusing to me . btw I think whatever language your learn , u need to do is concentrate on da' language. While I confusing with C++ and VB , I thought , da' kind of work can do in VB and skiped the C++ concept . But It regret for da't . Furthermore I learned abt java in second year . I though Java is harder than C++ . And then in third year , we learned abt Assembly and VB . I can't understand why did they still learn abt VB till. The course should be VB.net or C# . but Assembly may be very useful for reverse engineer
ရန်ကုန်မှာC++ သင်တဲ့သင်တန်းများရှိသေးလားမသိဘူး။ ရှိရင်တက်ချင်လို့ပါ။ ခုတော့ C# တက်နေတယ်။ C# ပဲပြီးအောင်အရင်တက်ရင်ကောင်းမလားဗျ ???
ဆရာဦးအောင်မြင့် ရေးတဲ့ c++ စာအုပ်
ကျွန်တော် medfire ကတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
Australia က ကျောင်းတွေမှာ foundation က စပြီး VB ကိုသင်တယ်။ ဒါကြောင့်လားတော့မသိဘူး ausi ကောင်တွေချာချာလည်လို့။ concept တွေလည်းမရှိ။ ဒါပေမယ့် သူတို့က သိချင်တာမှန်တမျှကို online ကရှာလို့ရတယ်။ ဒါကြောင့် ကျောင်းမှာသင်တဲ့အခါ ပြသာနာသိပ်မရှိကြဘူး။ မသိရင် အွန်လိုင်းမှာတတ်ရှာကြတယ်။ သင်နေတုန်းရှာလို့ရတော့ သူတို့အတွက် ပြသာနာမရှိဘူး။ oversea student တွေက တော့ အခြေခံမရှိရင် ရူးတာပဲ။ ကျွန်တော်တောင် UCSY မှာ ခြောက်လလောက်တတ်ဖူးလို့ C++ အခြေခံရှိတော့ VB သင်တဲ့အခါသိပ် မခက်ဘူး။ ဒါကြောင့် C++ ကို အရင်လေ့လာသင့်တယ်လို့ ကျွန်တော်လည်းမြင်တယ်။ အခြေခံ concept သာရှိရင် တခြား ဘာ language ကိုလေ့လာလေ့လာ ပြသာနာမရှိတော့ဘူး။ အခုမှပဲ C++ သင်ပေးတဲ့ကျောင်းက ဆရာမ (ဟုတ်ဘူး မှားသွားလို့) ကျောင်းကျူရှင် က ဆရာမကို ကျေးဇူးတင်မိတော့တယ်။
C++ သင်ပေးတဲ့ကျောင်းက ဆရာမ (ဟုတ်ဘူး မှားသွားလို့) ကျောင်းကျူရှင် က ဆရာမကို ကျေးဇူးတင်မိတော့တယ်။
ကျောင်းက ဆရာမတွေ သင်ကြားတာကောင်းပါတယ်။ အမှန်တကယ်စဉ်းစားသင့်တာက ကျောင်းကဆရာမတွေသင်ကြားတာကို ကျူရှင်တွေယူပြီး စိတ်ပါ၀င်စားနားထောင်တဲ့ကျောင်းသားရှိလို့လား? လက်ချိုးရေလို့ရမယ်ထင်တယ်.